Amanqaku kaTim Piazza Martech Zone |
Amanqaku ngu UTim Piazza
NgoLwesibini, Meyi 17, 2011 Lwesine, Okthobha 27, 2011 UTim Piazza
Akuqhelekanga kwiingcali zokuthengisa ukukhangela ukuxoxa kunye nokwabelana ngamaqhinga okuphumeza ukuthengiswa kweendaba zoluntu njengeqhinga le-SEO. Ngokucacileyo, uninzi lwezithuthi zewebhu ezazisetyenziselwa ukuqala ngeinjini zokukhangela ngoku ziqhutywa ngokwabelana kwezentlalo, kwaye kubathengisi abangenayo, lo mthombo mkhulu wezithuthi awunakuhoywa. Kodwa kuyolula ngentelekiso ukutsala ukuthengisa imithombo yeendaba zentlalo phantsi kwesambulela sesicwangciso se-SEO. Kuyavunywa, kukho izinto onako ukuzenza
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 9, 2011 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 UTim Piazza
I-WordPress yenze inyathelo eliphambili kwindaleko kwiqonga lokubhloga, ukuyisondeza kwinkqubo yolawulo lomxholo egcweleyo ngokulandela umkhondo wokuhlaziya, inkxaso ngakumbi kwiimenyu zesiko, kunye neyona nto inomdla kum-indawo ezininzi zenkxaso ngemephu yedomain. Ukuba awuyiyo inkqubo yolawulo lomxholo junkie, kulungile. Ungatsiba ngaphaya kweli nqaku. Kodwa kwamanye ama-techno-geeks, iintloko zekhowudi kunye ne-apache-dabblers, ndifuna ukwabelana ngento enomdla, kunye nento epholileyo. Indawo ezininzi
Onke amajelo eendaba afikileyo nasele esidlulile asweleke ngenxa yezizathu ezibini, nokuba kukusilela ukwenza into entsha, okanye ukungakwazi ukulawula umlinganiselo womqondiso ukuya kwingxolo. Kwimeko kaGoogle umqondiso ulungile ngokwenene kwiziphumo zokukhangela kwiphepha lokuqala kwaye ingxolo ziziphumo zokukhangela ezingenamsebenzi ezingena ngaphakathi kwaye zingcolise ezo zikhundla ziphezulu. UGoogle ngekhe abe yeyona injini yokukhangela ekhokelayo ukuba bebengahoyanga kangako malunga nomqondiso-wabo-wengxolo. Mva nje, uGoogle ubenjalo
NgoMvulo, Februwari 7, 2011 NgoMvulo, Februwari 7, 2011 UTim Piazza
I-Facebook yenza isityholo sokuthula ukufikelela kwinombolo yakho yefowuni. Kwiiveki ezidlulileyo benze iinguqu ezimbini ezibonakalayo eziphakamisa amalungiselelo okulawula indawo yentengiso ehambayo. Kuqala baqale ukulumkisa abasebenzisi abangakhange babonelele ngenombolo yeselfowuni ukuba ukhuseleko lwabo kuFacebook lusezantsi, kwaye inyathelo lokuqala lokonyusa ukhuseleko lwabo kukubonelela ngenombolo yeselfowuni. Oku kuyaluqinisa ukhuseleko, njengoko abantu bethanda ukuba nalo
NgoLwesine, uJanuwari 27, 2011 NgoLwesithathu, Meyi 2, 2012 UTim Piazza
Zintathu iintlobo zeeprojekthi. Ezo unokuzenzela ngokwakho, onokuthi uhlawule omnye umntu ukuze akusebenzele, kunye nezo ufuna ukusebenzisana nabanye kuzo. Isoftware yolawulo lweprojekthi luhlobo lwesithathu. Kutshanje ndiye ndafumanisa iMavenlink, isicelo solawulo lweprojekthi esekwe kwilifu esifana neBasecamp, kodwa kugxilwe kwiimfuno zabacebisi kunye nabasebenza ngokukhululekileyo. IMavenlink ikuvumela ukuba wenze iiprojekthi,